Yabụ, Saw Hụrụ Ya? - Okwu a
Yabụ, Saw Hụrụ Ya?
Ihe na April 15, 2022 April 15, 2022 by Mark
Nwoke ihe mgbu, nke Matthew Brooks dere
E bipụtara ya na October 18th, 2007.
IN Njem njem m na Canada na United States nile, a gọziri m ka mụ na ụfọdụ ndị ụkọchukwu mara mma na ndị dị nsọ nọrọ - ndị ikom na-atọgbọ ndụ ha n'ezie maka atụrụ ha. Ndị dị otú ahụ bụ ndị ọzụzụ atụrụ Kraịst na-achọ ụbọchị ndị a. Ndia bu ndi ozuzu aturu ndi aghaghi inwe obi a iji duru aturu ha n'oge na abia.
AK TRKỌ Eziokwu
Otu onye nchụaja dị otú ahụ kọrọ akụkọ a nke ọma gbasara ihe mere mgbe ọ nọ na seminarị…
Mgbe a na-eme Mass n’èzí, o leliri anya n’ebe onye ụkọchukwu nọ n’oge edoro nsọ nsọ. O juru ya anya na ọ hụghịkwa ụkọchukwu ahụ ọzọ, kama nke ahụ. Jesus ada ke ebiet esie! Ọ pụrụ ịnụ olu ụkọchukwu ahụ, ma ọ hụrụ Kraịst.
Ahụmahụ nke a dị nnọọ omimi nke na ọ jidere ya n'ime, na-atụgharị uche na ya ruo izu abụọ. N'ikpeazụ, ọ ghaghị ikwu banyere ya. Ọ gara ụlọ rector kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya. Mgbe Rector zara, ọ lere anya otu seminarị wee sị, “Ya mere, ị hụkwara Ya anya? "
NA PERSONA KRISTI
Anyị nwere okwu dị mfe, mana nke miri emi na Chọọchị Katọlik: na persona Christi - n'ime Kraist.
N'ime ọrụ aka nke ụkọchukwu a họpụtara ahọpụta, ọ bụ Kraịst n'onwe ya nọ na Chọọchị ya dị ka Isi nke ahụ ya, Onye Ọzụzụ Atụrụ nke ìgwè atụrụ ya, nnukwu onye nchụàjà nke àjà mgbapụta, Onye Ozizi nke Eziokwu. Ndị ohu a ka a họpụtara ma doo ha nsọ site na sacramenti nke Orders Holy nke Mụọ Nsọ na-enyere ha aka ime n’onwe ha onye isi nke Kraịst maka ọrụ nke ndị otu nile nke Nzukọ-nsọ. Onye ozi a họpụtara bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, “akara ngosi” nke Kraịst onye nchụàjà. -Katkizim nke Chọọchị Katọlik, n. 1548, 1142
Ụkọchukwu abụghị naanị onye nnọchi anya nkịtị. Ọ bụ ezi ihe nnọchianya na ụzọ ndụ nke Kraịst. Site na bishọp na ndị ya na ha na-arụkọ ọrụ—ndị nchụ-aja nọ na-elekọta ya—Ndị nke Chineke na-achọ ọzụzụ atụrụ nke Kraịst. Ha na-elegara ha anya maka nduzi, nri ime mmụọ, na ike ahụ nke Kraịst nyere ha ịgbaghara mmehie na ime ka ahụ Ya dị n'àjà nke Mass ahụ. i imomi Kraịst ke oku mmọ. Ma gịnị ka Kraịst, Onye Ọzụzụ Atụrụ, mere atụrụ Ya?
M ga-atọgbọ mkpụrụ obi m n’ihi atụrụ m. Jọn 10:15
Onye ọzụzụ atụrụ e gburu n’elu
Ka m na-ede ihe a, ihu nke narị otu narị ndị ụkọchukwu, ndị bishọp, na ndị kadinal ndị m zutere na njem m na-agabiga n’ihu m. M na-asị n’obi m, “amnye ka m bụ ide ihe ndị a?” Olee ihe ndị ọ bụ?
Na oge awa ahụ eruwo ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ịtọgbọ ndụ ha maka atụrụ ha.
Oge awa nke a na-anọrịrị na Nzukọ-nsọ. Ma n'oge udo, ọ bụrụla ihe atụ karịa - ọnwụ "ọcha" nke ịnwụ maka onwe ya. Ma ugbu a, oge eruwo mgbe ndị ụkọchukwu ga-erite uru ka ukwuu maka ịbụ “Onye Ozizi nke Eziokwu.” Mkpagbu. Ikpe. N'ebe ụfọdụ, nwụrụ. Ofbọchị ime nkwekọrịta gafere. Ofbọchị ịhọtara eruola. Ihe ahụ a rụrụ n’elu ájá ga-adakpọ.
Ndị na-ama okpukpere chi ọhụrụ a aka nwere nhọrọ siri ike. Ma ọ bụ na ha kwekọrọ na nkà ihe ọmụma a ma ọ bụ na ha nwere atụmanya nke martyr. - Fr. John Hardon; Etu ị ga-esi bụrụ onye Katọlik na-eguzosi ike n'ihe taa? Site n'Beingnọgidesi Ike na Bishop nke Rome; ederede site na therealpresence.org
Dị ka otu onye Protestant na-enye nkọwa si kwuo ya, “Ndị họọrọ ịlụ di na nwunye mmụọ nke ụwa n'oge a, ga-agba alụkwaghịm na-esote."
Ee, ọ bụrụ na ndị nchụàjà ga-abụ ihe oyiyi nke Onye Ọzụzụ Atụrụ Ukwu ahụ, ha aghaghị iṅomi Ya: O rubere isi ma na-eguzosi ike n’ihe nye Nna ahụ ruo ọgwụgwụ. Maka onye ụkọchukwu, yabụ, iguzosi ike n'ihe nye Nna nke Eluigwe na-egosipụtakwa n'iguzosi ike n'ihe nye ndị Nna di Nsọ, Pope, onye bụ Vicar nke Kraịst (na Kraịst bụ onyinyo nke Nna ahụ.) Ma Kraịst hụkwara atụrụ ya n’anya ma jeere ya ozi ma jiri onwe ya mee ihe maka atụrụ n’ime nrubeisi a: Ọ hụrụ nke ya n’anya “ruo ọgwụgwụ” n’anya.cf. Jọn 13:1 O meghị ihe tọrọ mmadụ ụtọ, kama ọ bụ Chineke. Na n'ime ihe na-atọ Chineke ụtọ, ọ na-ejere ndị mmadụ ozi.
Ana m achọ inweta ihu ọma mmadụ ma ọ bụ Chineke? Ka m na-achọ ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ? Ọ bụrụ na m ka na-achọ ime ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ, agaraghị m abụ ohu nke Kraịst. (Gal 1:10)
Ewoo! Nnukwu nsi nke oge anyị: ọchịchọ ime ihe na-amasị ụmụ mmadụ ibe anyị. Nke a abụghị arụsị ọla edo nke Ụka ọgbara ọhụrụ guzobeworo n’obi ya? Anụwo m ọtụtụ oge ka a na-ekwu na Ụka ​​na-adị ka NGO (nzukọ na-abụghị nke gọọmentị) karịa otu ihe omimi ụbọchị ndị a. Gịnị na-eme ka anyị dị iche n'ụwa? N'oge na-adịbeghị anya, ọ bụghị ọtụtụ. Oh, otú anyị chọrọ ndị nsọ dị ndụ, ọ bụghị mmemme!
Otu n'ime mmekpa ahụ ndị bịara mgbe Vatican nke Abụọ gasịrị, n'ebe ụfọdụ, e wepụrụ n'ebe nsọ nke ihe nnọchianya nke Jisọs ahụ akpọgidere n'obe na nkwuwa okwu nke Àjà nke Mass. Ee, nkpọgidere Kraịst aghọọla ihe mkparị. ọbụna nye nke Ya. Anyị ewepụla mma agha nke Mmụọ Nsọ - eziokwu - ma fegharịa n'ọnọdụ ya nku na-egbu maramara nke " ndidi." Ma dị ka m dere na nso nso a, a na-akpọ anyị Bastion ijikere maka agha. Ndi ichoro ichoro nku nke nkwekorita a gha ejide ya na ikuku nke ugha, wepu ha.
Gịnị banyere onye nkịtị? Ya onwe ya bu kwa nke òtù ndị nchụàjà nke Kraist, n’agbanyeghi n’uche di iche na ndi ejiri mmanu puru iche nke Kraist tee na Ords Holy. Dị ka ndị dị otú ahụ, ndị nwoke dina a na-akpọ ka dina ala ndụ ya maka ndị ọzọ n'ọrụ ọ bụla ọ chọtara onwe ya. Ma ya ma ọ bụ nwanyị ahụ aghaghịkwa iguzosi ike n’ihe nye Kraịst site n’irube isi n’ebe onye ọzụzụ atụrụ nọ—onye nchụ-aja mmadụ, bishọp, na Nna dị Nsọ, n’agbanyeghị ihe ọjọọ na mmejọ ọ bụla nke onwe ya. Ọnụ nrubeisi a nye Kraịst dịkwa ukwuu. Ikekwe ọ ga-abụ karịa, n'ihi na ọtụtụ mgbe ezinụlọ onye nkịtị ga-eso ya na-ata ahụhụ n'ihi Oziọma ahụ.
M ga-agbaso uche gị ka ị ga-ekwe ka m mee ya site n'aka onye nnọchi anya gị. O Jisus m, a na m ebute olu Nzukọ-nsọ ​​ụzọ karịa olu ị na-agwa m. - St Faustina, Ebere Chukwu Site na Obi M, Akwụkwọ edemede, 497
Anyị nile aghaghi gụọ ego ọ ga-efu ọ bụrụ na anyị ga-eji ikwesị ntụkwasị obi jeere Jizọs ozi. Anyị aghaghị ịghọta ihe Ọ na-arịọ anyị n’ezie, wee kpebie nanị ma anyị ga-eme ya. Ole ole na ole na-ahọrọ okporo ụzọ dị warara - ma gbasara nke a, Onye-nwe-ayi kwuru okwu-ọnu nke-uku:
Onye ọ bụla nke chọrọ ịzọpụta ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọ bụla nke tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-azọpụta ya. (Luk 9:24)
Ọ na-arịọ anyị ka anyị bụrụ aka Ya na ụkwụ Ya n'ime ụwa. Bedị ka kpakpando na-enwu gbaa mgbe niile n'ọchịchịrị na-eto eto, na-ejidesi eziokwu ahụ ike.
E buliri [Jizọs] elu ma maa mma n’etiti mba niile Site na ndu nke ndị ahụ na-ebi ndụ dị ọcha n’idebe iwu. -Maximus Onye Nkwenye; Iwu nke awa, Vol IV, p. Ogbe 386
Ma ọbụghị aka ya na ụkwụ ya kpọgidere n’elu osisi? Ee, ọ bụrụ na ị ga-ebi ndụ nke ọma na iguzosi ike n’ihe nye iwu nke Kraịst, ị pụrụ ịtụ anya na a ga-akpagbu gị na ọbụna kpọọ gị asị. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ụkọchukwu. Nke ahụ bụ ọnụ ahịa anyị na-eche ihu n'ọkwa dị elu taa, ọ bụghị n'ihi na ebulila ọkọlọtọ nke Oziọma (ọ na-adịbu otu ihe), kama n'ihi na ibi ndụ ya n'ezie na-enwewanye ibu iro.
N’ezie, a ga-akpagbu ndị niile chọrọ ibi ndụ nsọpụrụ Chineke n’ime Kraịst Jizọs. (2 Tim 3:12)
Anyị na-abanyekwu n'ime agha nke ikpeazu nke Oziọma na mgbochi Oziọma. Onwere ihe nke agha anakpo ndi uka na ubochi ugbua, nkwulu akpachapughi anya nke ihe nile di nso ma di nso. Ma dị nnọọ ka arara Kraịst nye n'aka nke Ya, anyị onwe anyị kwa aghaghị ịtụ anya na ụfọdụ mkpagbu kpụ ọkụ n'ọnụ nwere ike ịbịa n'ime ụka anyị. N'ihi na ọtụtụ chọọchị taa adabawo n'ime mmụọ nke ụwa ruo n'ókè nke na ndị ji okwukwe na-ebi ndụ n'ezie aghọọ ndị na-eso ụzọ. ihe ịrịba ama nke esemokwu.
Ngọzi nādiri ndi esob persecuteduworo n'ihi ezi omume, n'ihi na ala-eze elu-igwe bu nke ndi ahu. Ngọzi na-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu ma na-akpagbu unu ma na-ekwu ụdị ihe ọjọọ dị iche iche megide unu n'ụzọ na-abụghị eziokwu n'ihi m. Na-aụrịnụ ọ andụ ma na-enwe ọ gladụ, n'ihi na ụgwọ ọrụ gị dị ukwuu n'eluigwe… (Mat 5: 10-12)
Gụọ nke ahụ ugboro ugboro. Nye ọtụtụ n'ime anyị, mkpagbu ga-abịa n'ụdị nke ịjụ mgbu, nkewa, na ikekwe ọbụna mfu ọrụ. Ma, ọ bụ na nke a n'ihi okwukwe nke ikwesị ntụkwasị obi ka a na-agba àmà dị ukwuu… Ọ bụ mgbe ahụ ka Jizọs na-enwu n'ime anyị n'ihi na mmadụ anaghịzi egbochi Ìhè nke Kraịst. Ọ bụ n’oge ahụ ka onye ọ bụla n’ime anyị bụ onye ọzọ Kristi, na-eme ihe na persona Christi.
Ma n’ime ịchụ onwe onye a n’àjà, eleghị anya ndị ọzọ ga-eleghachi anya azụ n’ịgba ama anyị nke Kraịst nwusịrị n’ime ya wee sị ibe ha, “Yabụ, gị onwe gị hụrụ Ya? "
Nkwado gị dị mkpa maka ozi oge nile a.
Gọzie gị, ma daalụ.
Iji soro Mark gaa njem The Ugbu a Okwu,
cf. Jọn 13:1
Ihe na ỤLỌ, Okwukwe na omume, Eziokwu siri ike.
← Nchụpụ Onye nche
Ụzọ nta nke St. Paul →
12	Facebook ozi
10	n'akpa uwe